HEIF, iyo inoshamisa nyowani yekumanikidza fomati yeIOS 11 | IPhone nhau
HEIF, iyo yekumanikidza fomati iyo ichachengetedza nzvimbo pane ako maDevices ane iOS 11
Kwekupedzisira Chikumi yaive zuva rakasarudzwa neApple kuti ripe maitiro ako matsva ekushandisa: iOS 11 uye mac OS Yakakwira Sierra. Pakanga paine tarisiro huru sezvo pakange pasina kuwanda kwakawanda pamusoro peanenge ari mashoko eanoshanda masystem. Imwe yemasimba makuru yaive kuenderana kwe HEIF, un compression fomati iyo inogona kuchengetedza yakawanda nzvimbo pane zvishandiso zvedu.
Nezvekuvandudzwa kwazvino, Apple yakanga yatove neyakaisa yayo yekuchengetedza system: APFS (Apple File Sisitimu) iyo yaibvumidza nzvimbo kuchengetedza kunyanya kune zvishandiso zvine 64-bit processor. Pane ino chiitiko, nekumisikidzwa kweIOS 11 takazvisimbisa izvo mufananidzo nemavhidhiyo mafaera ari hafu nehukuru mushure mekumanikidza muHEIF.
Zvidiki Zvitoro Zvino Zvinoita Sense, Apple: Kuunza HEIF
Tinotaura nezvazvo HEIF semhando yekumanikidza asi muchokwadi hazvina kudaro. Aya mazita anoreva yakakwira kunyatsoita mufananidzo fomati fomati irwo pacharo irwo rudzi rwebhokisi panopinda mafaera ekutanga. Ndokunge, iyo nzvimbo inochengeterwa mafoto nemavhidhiyo, semuenzaniso.
Zvepamutemo iyi compression system inoenderana nemafaira ISO Base uye mamwe ma multimedia mafaera senge zvinyorwa uye odhiyo, kunyange asiri madiki semifananidzo nemavhidhiyo. Chinangwa che HEIF zviri pachena: kubudirira - kuderera saizi faira pasina kurasikirwa nehunhu, chinangwa cheyakanaka compression system.
Iyi sisitimu inokwanisa kuzvisarudzira neyakaomarara zvishandiso zvese, asi hazvizokwanise kuchengeta HEIF yakatsindirwa zvemukati. Naizvozvo, A10 Fusion uye A11 Bionic processor chete ivo vese vanogona kuverenga uye encode. Tiri kutaura nezve izvo chete iyo iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus uye X vanogona save save space zvakanyanya neIOS 11.
Hatina kumboziva mhedzisiro izere yekubatanidzwa kweiyi system kune iOS 11, asi mushure mekumisikidzwa kwayo kwepamutemo tinogona kuona mhedzisiro yekupedzisira. HEIF inodimbura mafoto uye vhidhiyo mafaera muhafu mune yega yega yega yega nzira dzatinogona kutora mifananidzo muIOS 11, sezvaungaona mutafura iri pamusoro pemitsara iyi.
Kana isu tikatarisa patafura uye tichiongorora maratidziro ekuchengetedza anowanikwa mumakero e iPhone ne iPad, tinoona sei ikozvino 64GB iPhone X zvine musoro sekureba sekusina akawanda mafaera e multimedia akachengetedzwa uye iCloud inoshandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » HEIF, iyo yekumanikidza fomati iyo ichachengetedza nzvimbo pane ako maDevices ane iOS 11
Asi ne iPhone 6 Plus izvi hazvishande kunyangwe neIOS 11?